नेपाल लोकस्टारको मुख्य प्रायोजकमा आइएमई:: Artha Dabali
नेपाल लोकस्टारको मुख्य प्रायोजकमा आइएमई
काठमाडौं/ नेपाल लोकस्टारको मूख्य प्रायोजकमा आइएमईले सहभागिता जनाएको छ । सर्वाधिक चर्चित संगित विधामा आइएमईले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदा आयोजकले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर धन्यबाद प्रकट गरे । यसले लोक संगितकै श्रीबृद्धिमा थप योगदान दिने विस्वास दिलाए ।
यस विधामा प्रत्येक वर्ष हजारौ गीत रिलिज हुन्छन् । युटुव तथा अन्य श्रव्य दृष्य संचार माध्यमहरुमा करोडौं पटक हेरिन्छन्
। संगीत विधाहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै उत्पादन मूलक विधा पनि लोक संगीत नै हो । विश्वव्यापी करणको यस युगमा लोक संगीत युवा पुस्ताको समेत रुची भइरहेको आभास लोक संगीतका स्रष्टा आफैले गर्ने गरेका छन् ।
लोकसंगीतलाई व्यावसायीक बनाउने प्रयास स्वरुप नेपाली टिभी च्यानल मा सर्वाधिक रुचाइएको रियालिटी सो विधासंग लोक संगीतलाई समायोजन गरी नेपाल लोक स्टार कार्यक्रम जन्मेको हो ।
यस कार्यक्रमको लागत करिब १० करोड रुपैया रहेको छ ।
यस अर्थमा नेपाल लोक स्टार नेपालको सबै भन्दा ठूलो मौलिक रियालिटी सो भन्दा फरक नपर्ला । यसको निर्माण चाहना मिडियाले आफ्नै मौलिक संगीतलाई अन्तराष्ट्रिय फर्म्याटमा ढाली आफ्नै नेपाली ब्राण्डमा बन्न लागेको सो को निर्माणमा संलग्न सम्पूर्ण म्यानपावर नेपाल आइडल सिजन २ लगायतका व्यक्तिहरु संलग्न हुन् ।
७ वटै प्रदेशमा अडिसन आयोजना गरी हुने उक्त कार्यक्रममा दोहोरी गायक गायिकाहरु मध्येबाट सरदर प्रति प्रदेश ५० प्रतिस्पर्धी खुला छनोट गरिएको थियो ।खुला अडिसनमा फागुन १६ गते शुरु भई चैत्र २५ गते समाप्त भएको थियो । त्यस पश्चात् खुला अडिसनबाट छनौट भएका ३ सय ५० प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रदेश अनुसार जज अडिसनमा सहभागी गराइएको थियो ।
“नेपालीलोक संगीतका लागि आइएमई नेपाल लोक स्टार कोसे ढुङ्गा साबित हुने आयोजकको विस्वास छ । लोक मात्र नभई सम्पूर्ण संगीत क्षेत्रलाई नै उकास्ने विश्वास लिएको दावी छ ।
नेपाली माटोललाई सुहाउँदो यस्ता मौलिक रियालिटि शोहरुको उत्पादनले नेपाली मिडिया र नेपाली मिडिया बजारलाई अझ उकास्ने निश्चित छ ।
नाडा अटो शो मा महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल, यस्ता छन् विशेषता
दशैंमा केएनपिले रङ्गमा दङ्ग पार्ने ! ग्राहकलाई १० तोला सुन
सुनचाँदी किनबेच गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुस् आजको मूल्य कति छ